Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone 4s si iPhone 5
Transfer Xiriirada ka iPhone 4s si iPhone 5 gudahood 4 Talaabooyinka
> Resource > iPhone > Transfer Xiriirada ka iPhone 4s si iPhone 5 gudahood 4 Talaabooyinka
iPhone 5 ayaa la sii daayay, iyo taageerayaal badan ay Apple waalan ku saabsan. Tani waxay xubin cajiib ah oo qoyska iPhone waa hit weyn; Waxay keenaysaa bandhigay fiican, hawlgalka macaan, screen weyn iyo qaababka badan oo dheeraad ah oo cusub. Taageerayaasha badan oo aan la sugi karin xariirta hore iPhone 4s ama iPhone 4 ilaa iPhone ah 5. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa in dhibaatooyin ka kala wareejinta xidhiidhka ka dhexeeya iPhone 4s iyo iPhone 5. Tani waa dhibaato ka badan ama ka yar ah.
Halkan waxaan maqaalkaan qoro si ay u caawiyaan xiriirada kala iibsiga ka iPhone 4s si iPhone 5, hab gebi fudud oo waxtar leh.
4 tallaabooyin si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone 4s si iPhone 5
Tallaabooyinka soo socda ayaa waxaa lagu sameeyey Windows Version, iyo qalliinka waa isku on Version Mac ah.
Tallaabada 1. Soo qaado xiriir ah wareejinta qalab
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) waa barnaamij si sahlan loo isticmaalo in aad nuqulka xiriirada aad ka iPhone 4s si iPhone 5. Waxay ku wareejinta ay soo saarida Lugood aad files dib.
Download version maxkamad hoose, waxaad dooran kartaa nooca sida nidaamka hawlgalka your computer ee.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone 4s gurmad file
Ka hor inta iskaanka, hubi in aad Lugood ayaa raad raac ah oo aad iPhone 4s sameeyo, haddii aan, fadlan hagaagsan oo Lugood oo waxaad ka samaysaa gurmad ah hore.
Ka dib markii ay wax walba oo la sameeyo, ordo barnaamijka. Interface An sida hoos lagu tusay doonaa on your computer. Dooro magacaaga qalab iyo riix Start Scan.
Tallaabada 3. Warbixiinta iPhone 4s Xiriirada in Computer
Marka iskaanka ay ka badan tahay, aad gurmad iPhone 4s Lugood lagu soo bandhigi doonaa qaybaha: xiriirada, fariimaha, sawiro, videos iyo in ka badan.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh xiriirada iyo dooran kuwa aad rabto in lagu wareejiyo. Markaas riix bogsii, ee ka dooro mid folder iyaga badbaadiya on your computer.
Fur folder iyo waxaad ka arki kartaa xiriirada aad ee 3 qaabab: .html, .csv, .vcf. Riix .vcf folder oo waxaad ku dari kartaa xiriirada kuwa si aad Muuqaalka ama Windows Xiriirada, ku dar xiriir ah mid ka mid ka mid ah.
Tallaabada 4. Kala beddelashada Xiriir
Sida loo dar Xiriirada in Outlook ama Windows Xiriir
Midig u guji .vcf qaab xiriir iyo waxaad yeelan doontaa ugu yaraan labo doorasho si aad u furto: Muuqaalka ama Windows Xiriirada. Waxaad go'aansan kartaa mid ka mid ah in la furo xiriir ah, ka dibna raac tilmaamaha in aad ku darto si aad xiriirada PC liiska.
Ka dib markii dhammaan dadka ay khuseyso ayaa lagu daray in ay aad xiriirada PC liiska, waxaad bilaabi kartaa xiriirada hadda wareejinta.
Hagaagsan aad iPhone 5 la Lugood iyo guji Info, waxaad awoodi doontaa inaad si hagaagsan marka aad la xiriirayso Muuqaalka ama Windows Xiriirada. Waxaa hagaagsan oo xiriir ah ku qor aad ku daray aad iPhone 4 xiriirada galay.
Xiriirada aad iPhone yihiin si guul leh loo wareejiyay aad iPhone cusub oo 5 hadda. Taasi fudud ku filan.
Notes: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) ma xiriirada soosaaray kaliya kaga imaanayo Lugood, waxaa la si weyn loo isticmaali karaa in xogta soo kabsaday u iPhone ama iPad taxanaha. Iyada oo taageero u ah, waxaad si fudud u soo kaban karto, aad files lumay sida farriimaha, xiriirada, sawiro ka iPhone 4s ama iPhone 5.
Sida loo isticmaalo Waalidiinta oo xakameeya iPhone iyo iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Google Nexus si iPhone
Top 10 iPhone Security Apps Ilaali iPhone
Sida loo kaabta ama dhoofinta WhatsApp Messages ka iPhone
iPhone Memory Card Recovery, ka iPhone Gudaha Memory Card Ladnaansho Data